Openwork घण्टी (हुक): रेखाचित्र, फोटो, वर्णन
Openwork घण्टी (हुक) योजना, फोटो, वर्णन
भित्री सजावट, crocheted, लामो कुनै आश्चर्य छ। एकदम परिचित इस्पात तकिये, पट्टियां, चित्र वा vases। तर Bells को रूप मा क्रिसमस सजावट को विचार अपेक्षाकृत नयाँ छ। यसलाई सक्रिय, युरोप मा प्रयोग आफ्नो घर, क्रिसमस पेड, Windows र ढोका सजाने। नाजुक घण्टी - - हुक साथै, यो एकदम प्यारा सानो वर्तमान प्रदान गर्नेछ। यस्तो उत्पादनहरु को योजना सजिलो छैन, तर यो सबै भन्दा कुशल कर्मचारीहरूको लागि उपलब्ध छ।
Bells लागि yarns
सानो crochet वस्तुहरु बुनाई लागि धेरै राम्रो कपास यार्न आउँछ। यो crochet, र mercerized कपास चयन गर्न मनमोहक छ। यो मुद्दा छ subjected गर्न क्षार उपचार, त्यसैले यसलाई छैन pushitsya यो छ निर्विघ्नता र taut torsion।
भौतिक सजावट जडित एक धेरै expressive दिन्छ। अन्यथा, यो राम्रो कुनै न कुनै र पनि मोटा घण्टी हुक प्राप्त गर्छ। योजना साधारण प्रयोग यार्न बारेमा 550-600 m / 100 ग्राम बाक्लो लागि डिजाइन गरिएको छ। एउटा चरम मामला, यो सम्भव लागू भौतिक गर्न लम्बाइ को यार्न 450-500 m / 100 ग्राम।
Campanula हुक: योजना र वर्णन
को तस्वीर निम्न तरिकामा बुना छ जो एक घण्टी, शो:
4 टाँका (VI) को एक श्रृंखला सुरु हुन्छ।
EP 1 उठाने polustolbikov 12 (भज)। Polustolbiki SC (CCH) संग डंडे जस्तै सञ्चालन, तर लुपमा र बरु क्रमिक भन्दा, सँगै provyazyvayut nakida।
EP 1 वृद्धि, 1 एसएस, एस एस 1, एसएस2आधार लुपमा (अर्थात्, प्रत्येक तेस्रो डबल भज)।
4 कैप रिकभरी, EP 1, स्तम्भ तीन SC। अनुक्रमदोहोर्याउनुहोस् (उठाने लूपहरूको बाहेक)।
EP 1 उठाने स्तम्भ 32 बिना SC (SC)। दोहोरिने थप दुई पटकसम्म।
EP 1 लिफ्ट,4SC, छठी 20, 15SC-औं VI 5VP,4SC।7पटक दोहोरिन।
EP 1,2SC उठाने कम कट्टर6Sc ठूलो कट्टर 8 SC, EP 2, ठूलो कट्टर 8 SC, कम कट्टर6SC। अनुक्रम:2SC, तल्लो कट्टर6SC, एक ठूलो कट्टर4SC, निकटतम पत्रदल बीचमा गर्न ट्याब संलग्न गर्न स्तम्भ जडान, एक ठूलो कट्टर4SC, VP 2, एक ठूलो कट्टर 8 SC, तल्लो कट्टर6SC।
यो विधि नै वा सानो घण्टी हुक योजना केही सरल प्रदर्शन, तर परिपत्र ब्लेड संग कौशल आवश्यक हुनेछ। हामी बुनाई समयमा तिनीहरूलाई टाँसिएको छैन, पत्रदलको बाँध यदि प्रक्रिया सरलीकृत गर्न सकिन्छ। उत्पादन तयार भएपछि तिनीहरूले सिले गर्न सकिन्छ।
सजावट लागि माउन्ट
यसलाई सुरक्षित स्प्रूस वा अन्य होल्डर को एक शाखा संलग्न थियो घण्टी गर्न, तपाईँले माथि पाश बाँध्न आवश्यक छ। भौतिक घंटी र साटन वा organza को रिबन लिङ्क गरिएको छ जो नै मुद्दा, उपयुक्त छ। एक हुक संग गाँसिएको घंटी गर्न फोटोमा प्लास्टिक सर्कल sewed। यो धेरै सुविधाजनक र सुन्दर छ। ringlet द्वारा रिबन को एक धनुष टाई गर्न सक्छन्, या केवल एक शाखा मा राखे।
आकार राख्न र यसको मुख्य कार्य पूरा गर्न समाप्त उत्पादन, यो उपचार गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईँले बाक्लो गत्ता को अग्रिम कोन मा तयार धारण गर्न आवश्यक आफ्नो हात र एक लिङ्क घण्टी हुक ढाँचा सिर्जना र योजना फरक छैन। कागज नरम छैन भनेर, यो पलीथीन संग र्याप गर्नुपर्छ र त्यसपछि एक घण्टी लगाउने।
उत्पादन आकृति को कोन फरक छ भने, र आधार उपयुक्त प्रकार दिइएको हुनुपर्छ। दीपक, कप, आकार vases र अन्य उपयुक्त आकार वस्तुहरु प्रयोग गर्न वैकल्पिक रूपमा।
फारम मा एक घण्टी लगाएका, यो उदार स्टार्च, PVA गोंद वा gelatin को एक समाधान संग moistened। सुकाएपछि यसलाई बलियो र मोटा क्रिसमस घण्टी हुक बाहिर जान्छ। ठूलो खुलने संग सर्किट ढाँचाहरूलाई कपडा धेरै नरम हुनेछ हुन सक्छ। यस मामला मा, उत्पादन समाधान धेरै पटक संग गर्भवती हुन सक्छ।
तपाईं फूल को एक गुच्छा कसरी प्याक गर्न थाहा छ?
बच्चाहरु रंग कागज बनेको "शरद" टालो सजावट
व्यवस्थापन (सीएससी RANHiGS), नोवोसिबिर्स्क को साइबेरियन संस्थान: ठेगाना, संकाय
Pragmatism - नैतिकता को कमी छ?
जेल रंग पलिश र यसको प्रयोग सुविधाहरू
आफ्नै हातमा एउटा जलजीवालय लागि खुम्च्याउने
केक "minnie माउस": मास्टिक र सजावटी मूर्तिहरु को उत्पादन को लागि सुझाव
भोलिको लागि कुंडली
Meskhetian तुर्क: मूल विशेषताहरु,, मान्छे को समस्या
पाठ, slogans, slogans र mottos: खेल घटनाहरू लागि सबै भन्दा राम्रो मन्त्र